JMS - Shona
KuJindal Medi Surge, tiri kushandisa hupamhi, chiyero uye ruzivo rwekufungidzira zvakare nzira iyo hutano hunounzwa uye kubatsira vanhu kurarama hupenyu hurefu, hune hutano. Munzvimbo iri kushanduka zvakanyanya, tiri kuita hukama pakati pesainzi uye tekinoroji kuti tibatanidze hunyanzvi hwedu mukuvhiya, mhinduro dze orthopedics nepfungwa hombe dzevamwe kugadzira uye kuendesa chiremba uye murwere-centric zvigadzirwa nemhinduro.
Nezve Jindal Medi Surge (JMS)
Isu tiri Leading Manufacturer (Branded & OEM) yeOrthopedic Implants, Instruments, External Fixator yeHuman & Veterinary Orthopedic Surgeries. Isu tinopa imwe yeakaomesesa orthopedics portfolios munyika. Mhinduro dzeJMS, muhunyanzvi zvinosanganisira kuvakazve pamwe chete, kukuvadzwa, craniomaxillofacial, kuvhiyiwa musana uye mushonga wemitambo, zvakagadzirirwa kusimudzira kutarisirwa kwevarwere panguva yekuendesa kukosha kwekiriniki uye hupfumi kuhurongwa hwekuchengetedza hutano pasi rese. Sezvo isu tichipemberera hutsva, kuzvipira kwedu "kuchengeta nyika mupink yehutano".
Semapiyona mumidziyo yekurapa, tinoramba tichiisa pfungwa pakusimudzira mwero wekutarisira-kushanda kuwedzera kuwanikwa kwevarwere, kuvandudza mhedzisiro, kuderedza hutano hwehurongwa hwemitengo uye kutyaira kukosha. Isu tinogadzira hutano hwakangwara, hwakanangana nevanhu kubatsira varwere vatinoshandira kupora nekukurumidza uye kurarama kwenguva yakareba uye zvine simba. Makambani edu anoshanda akati wandei ekuvhiya hunyanzvi:
Orthopedics - mabhizinesi aya akatarisana nekubatsira varwere pamwe nekuenderera mberi kwekuchengeta - kubva pakukurumidza kupindira kusvika pakuvhiyiwa kutsiva, nechinangwa chekubatsira vanhu kuti vadzokere kukurarama hupenyu hunoshanda uye hunogutsa.
Kuvhiya - Muzvipatara munyika yose, vanachiremba vanoshanda nechivimbo vachishandisa maitiro ekuvhiya anovimbika uye zviridzwa zvakagadzirirwa kupa kurapa kwakachengeteka uye kunobudirira kune zvakasiyana-siyana zvehutano hwehutano.
Jindal Medi Surge ine nhoroondo yakapfuma - inosanganisira hunyanzvi, kushanda nevatungamiriri veindasitiri, uye kuita mutsauko muhupenyu hwevarwere vazhinji pasirese.
Tinofemerwa kuva vagari venyika vakanaka. Isu tine mutoro kunharaunda dzatinogara nekushanda uye kunharaunda yenyika. Tinofanira kuva vagari vakanaka. Tinofanira kukurudzira kuvandudzwa kwevanhu, uye hutano hwakanaka nedzidzo. Tinofanira kuchengetedza midziyo yatine ropafadzo yekushandisa, kuchengetedza zvakatipoteredza nezviwanikwa. Credo yedu inotinetsa kuti tiise zvinodiwa uye kugara zvakanaka kwevanhu vatinoshumira pakutanga.
Semugadziri wemidziyo yekurapa, Jindal Medi Surge inorangarira pesvedzero yedu uye maitiro edu pane zvakatipoteredza. Nzvimbo yedu yakaderedza kushandiswa kwayo kwemakomisheni anopisa. Isu takaita nhanho mukuvandudza kurongedza zvakare. Nzvimbo yedu yakaisa kushandiswa kweEletroniki kune huwandu hwezvigadzirwa kuderedza kushandiswa kwepepa. Hutungamiri hwedu hwave kucherechedzwa neHurumende yeIndia nekuda kwezvipo zvayo mukuenderera mberi kwekuvandudza kwezvakatipoteredza uye kuratidzira kwekutevedzwa kwenguva refu nemitemo yezvakatipoteredza. Ese emasaiti edu anoshanda akananga kumazinga epamusoro ane akawanda zvivakwa.
Jindal Medi Surge yakasarudzika kusimudzira hupenyu hweavo vanoshaya kuburikidza nezvipo zvechigadzirwa, kupa kwerudo uye kubatanidzwa kwenharaunda. Verenga Zvimwe
Pane imwe nzvimbo, vashandi vepazvivakwa zvedu pasi rose vanozvipira semachipangamazano kuvana vechikoro, kupa ropa, kuunganidza matengu ezvekudya kumhuri dzinoshaya uye kuvandudza nharaunda dzavanogara.
EMAIL KUBVUNZA YEMUMBA: jms.indiainfo@gmail.com
BATA: Mr. Nitin Jindal (MD) | Ms. Neha Arora (HM) | Mr. Man Mohan (GM)
UNIT-2: Milkat Khopi Post Shivare Khopi Tal Bhor Dunhu Pune Khed Shivapur, Maharashtra INDIA.